အဖွဲ့လိုက် ဗီဒီယိုချတ်- မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
လူတွေက ပြောဆိုဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်ကြပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာနေတယ်ဆိုရင်ကော။အသုံးပြုသူပေါင်းစုံ ဗီဒီယိုချတ်ဝန်ဆောင်မှုငါးခုမှ စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် ဝဘ်ပေါ်ရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် စကားပြောရန်အတွက် သင့်ကိုယ်ပိုင် virtual club ကို ဖန်တီးရန် ကူညီပေးပါမည်။ဗီဒီယိုချတ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ အရည်အသွေးနှင့် အဆင်ပြေမှုသည် ရရှိနိုင်သော bandwidth မှ ပါဝင်သူများ၏ webcams အရည်အသွေးအထိ အချက်များစွာဖြင့် လွှမ်းမိုးထားသည်။ဒက်စတော့နှစ်လုံး၊ Windows လက်ပ်တော့နှစ်လုံးနှင့် MacBook တစ်လုံးတို့ကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ကွန်ပျူတာများကို Ethernet မှတစ်ဆင့် Network သို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး လက်တော့ပ်များကို ကြိုးမဲ့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအား တပ်ဆင်ရန်နှင့် အသုံးပြုရန် မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့တွင် ထပ်လောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိမရှိကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်။
Google Hangoutsထည့်သွင်းခြင်း Google Hangouts ကို အသုံးပြုရန်၊ သင်သည် Google+ အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါသည်။Windows XP နှင့်အထက်၊ Mac OS X 10.5 နှင့်အထက် သို့မဟုတ် Linux နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဘရောက်ဆာ plug-in တစ်ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ဗီဒီယိုချတ်ကို သင်၏ Google+ စာမျက်နှာမှ အကောင့်ဝင်ထားသည်။ညာဘက်တွင် Start Video Call ခလုတ်ကို တွေ့ရပါမည်။၎င်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အား Google သည် သင့်ဝဘ်ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် စမ်းသပ်စာမျက်နှာသို့ ဦးစွာရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ဒီအဆင့်မှာ မင်းသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ မင်းကိုမတွေ့သေးဘူး။
ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်း၊ သင်သည် YouTube ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
စမ်းသပ်မှုစာမျက်နှာတွင် ဗီဒီယိုချတ်အကြောင်း အသိပေးမည့် “စက်ဝိုင်းများ” (သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းအုပ်စုများ) ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည့် ဘလောက်တစ်ခုရှိသည်။ ဗီဒီယိုချတ်စတင်သောအခါ၊ ရွေးချယ်ထားသော "စက်ဝိုင်း" တွင်ပါရှိသောအသုံးပြုသူတိုင်း ၎င်းကိုမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒရှိပါက စကားဝိုင်းတွင်ပါဝင်ပါ။ချတ်စတင်ရန်၊ Join ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးခန်းသို့ သွားပါ။ ဘယ်ဘက်ရှိ ဘားတွင် ၎င်းတို့၏ Gmail လိပ်စာများကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် စကားဝိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် အခြားအသုံးပြုသူများကို ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင် လူ ၁၀ ဦးအထိ ပါဝင်နိုင်သည်။
ဗီဒီယို အင်တာဖေ့စ်နှင့် အရည်အသွေးစကားပြောဆိုမှုအတွင်း၊ စပီကာကို ဝင်းဒိုးကြီးတစ်ခုတွင် ပြသမည်ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ ပြတင်းပေါက်ငယ်များတွင် အခြားပါဝင်သူအားလုံးကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ ဤပြသမှုပုံစံသည် ယဉ်ကျေးသောဆက်သွယ်မှုကို ခံယူသည်။ အကယ်၍ လူနှစ်ဦးသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် တူညီသောအသံအား တစ်ချိန်တည်းတွင် ပြောဆိုပါက၊ Google Hangouts သည် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကိုသာ ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အလယ်တွင် ပြသမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း၊ Google ၏ရွေးချယ်မှုသည် သင့်အတွက် သင့်လျော်ခြင်းမရှိပါက၊ ပါဝင်သူများထဲမှ မည်သည့်ပါဝင်သူများကို ဝင်းဒိုး၏အလယ်တွင် ပြသမည်ကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။စမ်းသပ်မှုတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် ပါဝင်သူငါးဦးထက်ပို၍ စုစည်းလာသောအခါ ဗီဒီယိုသည် နှေးကွေးသွားကာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရုပ်ပုံသည် ပြတ်သားစွာ အရည်အသွေးနိမ့်သွားပါသည်။ အသံသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း ပုံပျက်နေသော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် ဗီဒီယိုနှင့် အသံနှစ်ခုလုံး၏ အရည်အသွေးမှာ အလွန်မြင့်မားသည်။
ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များ ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းအပြင်၊ Google Hangouts သည် အခြားသောအင်္ဂါရပ်များစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုပြတင်းပေါက်အောက်ရှိ ကြီးမားသောခလုတ်သည် သင့်အား အဖွဲ့လိုက် စာသားမက်ဆေ့ဂျ်တစ်စောင် ပေးပို့နိုင်သည်။ သို့သော် ပင်မဗီဒီယိုချတ်ဝင်းဒိုးတွင် ပါဝင်သူများထံမှ တစ်စုံတစ်ဦးထံ စာသားမက်ဆေ့ချ်ပေးပို့သည့် အချက်အလက်ကို ပြသမည်မဟုတ်ပါ။ ကျန်အသုံးပြုသူများသည် စာပေးစာယူကိုဖတ်ရန် "Chat" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်မှာ အောက်ခြေတူးလ်ဘားရှိ ခလုတ်ကို အသုံးပြု၍ YouTube ကို အသက်သွင်းနိုင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ညီလာခံတစ်လျှောက်လုံး ပင်မစခရင်ပေါ်တွင် ပြသမည့် ဗီဒီယိုကို သင့်အား ရှာဖွေနိုင်စေပါသည်။ ဗီဒီယိုပြန်ဖွင့်နေစဉ်တွင် Hangouts သည် သင့်မိုက်ခရိုဖုန်းကို အလိုအလျောက် အသံတိတ်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အသံသည် ဗီဒီယိုကို နောက်ခံတွင် ထုတ်လွှင့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင်သည် စကားပြောရန် လိုအပ်သေးပါက၊ Push to Talk ခလုတ်သည် ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဗီဒီယိုအသံအတိုးအကျယ်ကို လျှော့ချကာ သင့်မိုက်ခရိုဖုန်းကို ဖွင့်မည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော Notebook ပိုင်ရှင်များသည် ရေရှည်တွင် လက်ပ်တော့ကွန်ပြူတာများ၏ အပူလွန်ကဲမှုကို သိသာထင်ရှားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ဤဖြေရှင်းချက်ကို တိုတောင်းသော ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များအတွက်သာ အသုံးပြုရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Google Hangouts သည် အဖွဲ့ငယ်ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် လူတိုင်းတွင် Google အကောင့်ရှိရပါမည်။
Skype ပရီမီယံတပ်ဆင်ခြင်းSkype တွင် အဖွဲ့လိုက် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကျင်းပရန်၊ စာရင်းသွင်းခ ၉ ဒေါ်လာ/လ ဖြင့် Skype ပရီမီယံအကောင့်တစ်ခု လိုအပ်သည် (တစ်ရက် ပရီမီယံအသုံးပြုခွင့်ကို ၅ ဒေါ်လာဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည်)။ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကို စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ ပရီမီယံအကောင့်ပိုင်ရှင်သည် မည်သည့်အကောင့်ကို အသုံးပြုနေသည်ဖြစ်စေ - အခပေး သို့မဟုတ် အခမဲ့မပါဝင်ဘဲ အခြား Skype အသုံးပြုသူများကို ၎င်းထံသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ကွန်ဖရင့်စီစဉ်သူသည် အဖွဲ့ချတ်မှ ထွက်သွားပါက၊ ပါဝင်သူအားလုံးအတွက် အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးပါမည်။
Skype ၏ အခမဲ့နှင့် အခပေးဗားရှင်းနှစ်မျိုးစလုံးသည် ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဗီဒီယိုဖောက်သည်အက်ပ်လီကေးရှင်းကို ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကို အမြန်စီစဉ်ရန် လိုအပ်ပါက ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။ သင့်အကောင့်သို့ အကောင့်ဝင်ပြီးသည်နှင့် သင်သည် Facebook၊ Gmail၊ Hotmail၊ သို့မဟုတ် သင်၏ Skype အမည်ဝှက်ဖြင့် သူငယ်ချင်းများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ Skype Premium သည် ပါဝင်သူ ၂၄ ဦးအထိ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဗီဒီယိုချတ်ကို အသက်သွင်းရန်၊ ပရိုဂရမ်၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို အသုံးပြုရပါမည်။
ဗီဒီယိုကြားခံနှင့် အရည်အသွေးယေဘုယျအားဖြင့် Skype မှထုတ်လွှင့်သော ဗီဒီယိုနှင့် အသံအရည်အသွေးသည် အမြင့်ဆုံး ချီးကျူးထိုက်သည်။ ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအရည်အသွေးသည် Google Hangouts မှပြသထားသည့်အရာနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်- အများအားဖြင့် ကောင်းမွန်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး နှောင့်နှေးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဗီဒီယိုစီးကြောင်း ရပ်တန့်သွားပြီး ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ပြဿနာ ကြီးထွားလာသည်။ အသံအရည်အသွေးသည် Google ထက် အနည်းငယ်ပိုကောင်းပါသည်။ ပါဝင်သူအသစ်များကို သေးငယ်သော ဖန်သားပြင်များတွင် ပြသထားသော်လည်း လိုချင်သောစခရင်ကို ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပါဝင်သူတစ်ဦးပေါ်တွင် ဇူးမ်ချဲ့သည်။Webcam အရည်အသွေးသည် Google Hangouts အတွက်ထက် Skype Premium အတွက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ စမ်းသပ်မှုတွင် ဒက်စ်တော့များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော 720p HD ဝဘ်ကင်မရာနှစ်ခုနှင့် တပ်ဆင်ထားသော iSight ဝဘ်ကင်မရာပါရှိသော MacBook ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ iSight အတွက် Skype အတွက် ကြည်လင်ပြတ်သားမှု နှင့် HD webcam များအတွက် ခြားနားချက်မှာ အထင်ကြီးစရာဖြစ်သည်။ တူညီသောကင်မရာသုံးလုံးကို Google Hangouts နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းသည် iSight မှပုံသည်ပိုမိုရှင်းလင်းသွားသော်လည်း အရည်အသွေးတွင် သိသာထင်ရှားသောကွာခြားမှုမရရှိခဲ့ပေ။
ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များ Skype တွင် အဖွဲ့လိုက် ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုတွင် ထည့်သွင်းထားသော အသုံးဝင်သော ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင် ပါဝင်သူများသည် ဗီဒီယိုအောက်ရှိ အထူးဝင်းဒိုးတွင် ပြသမည့် ချတ်သို့ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပါဝင်သူများထဲမှ တစ်ဦးသည် စာသားမက်ဆေ့ချ်ကို ရေးသောအခါတွင် အခြားပါဝင်သူများသည် မက်ဆေ့ချတ်အိုင်ကွန်ပေါ်တွင် အနီရောင်အဝိုင်းငယ်တစ်ခုကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး မက်ဆေ့ချ်အသစ်တစ်ခုရောက်ရှိလာကြောင်း အချက်ပြသည်။ SMS မှတစ်ဆင့် အဖွဲ့ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ မက်ဆေ့ချ်များ ပေးပို့နိုင်သော်လည်း ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အပိုငွေပေးချေမှု လိုအပ်ပါသည်။ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဖိုင်များ (ပုံများ၊ MP3) ကို Skype မှတဆင့် အခြားအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများထံ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ အုပ်စုတစ်ခုသို့ ဖိုင်များပေးပို့ရန် ဘရောက်ဆာ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ကလိုင်းယင့်ကို ဖွင့်ရန် မလိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းကို ပင်မဝင်းဒိုးမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်သည်။
Skype Premium ရှိ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် အခကြေးငွေပေးချေပြီး အခြားဝန်ဆောင်မှုများထက် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထည့်သွင်းရန် ပိုမိုလိုအပ်ပါသည်။စမ်းသပ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှုငါးခုတွင် အသံအရည်အသွေးသည် အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ဗီဒီယိုအရည်အသွေးသည် အခမဲ့ Google Hangouts ဝန်ဆောင်မှုထက် ပိုကောင်းမည်မဟုတ်ပေ။
Tinychatသည် ဘရောက်ဆာအခြေခံ ဗီဒီယိုချတ်ဝန်ဆောင်မှု Tinychat ကိုထည့်သွင်း သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် မည်သည့်အရာကိုမျှ ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ - သင်သည် သင်၏ကိုယ်ပိုင် စကားပြောခန်းကို စုစည်းရန် သို့မဟုတ် ရှိပြီးသားအရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်သာ လိုအပ်သည်။Tinychat ဝန်ဆောင်မှုသည် နဖူးစည်းကြော်ငြာများဖြင့် အခမဲ့ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် chat room ကိုဖွင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ Tinychat သည် သင့်ဝဘ်ကင်မရာနှင့် မိုက်ခရိုဖုန်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် Tinychat မှ သင့်အား လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ မိုက်ခရိုဖုန်း သို့မဟုတ် Push to Talk အကြား ရွေးချယ်ရန် သင့်အား အချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအခြေအနေတွင်၊ ဤခလုတ်ကို ဖိထားမှသာ မိုက်ခရိုဖုန်းသည် အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။အခြားသူများကို ဗီဒီယိုချတ်သို့ ဖိတ်ကြားရန် လွယ်ကူသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ ချတ်ဝင်းဒိုးအထက်တွင်ရှိသော မျှဝေရန်ခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။ Tinychat သည် လူတိုင်းထံ ပေးပို့နိုင်သည့် URL တစ်ခုကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် သင်၏ Tinychat အဖွဲ့ကို သင်၏ Facebook၊ Twitter အကောင့်မှတဆင့် သို့မဟုတ် ဧည့်သည်အဖြစ် အမည်ဝှက်ဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ဧည့်သည်အသစ်များသည် ဗီဒီယိုချတ်ကို မြင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုစီးကြောင်းကို ချတ်ခန်းသို့ထည့်ရန်၊ စတင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းခလုတ်ကို နှိပ်ရပါမည်။
ဗီဒီယို မျက်နှာပြင်နှင့် အရည်အသွေးTinychat တွင်၊ သင်သည် ထုတ်လွှင့်မှု 12 ခုအထိ စီစဉ်နိုင်သော်လည်း ကြည့်ရှုသူအရေအတွက်မှာ အကန့်အသတ်မရှိပါ။Tinychat ရှိ ဗီဒီယိုအရည်အသွေးသည် ကောင်းမွန်သော်လည်း အသံအရည်အသွေးမှာ ညံ့ဖျင်းသည်။ကျယ်လောင်သောနောက်ခံဆူညံသံများသည် အထူးသဖြင့် စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည်။စကားသံများသည် Hangouts နှင့် Skype တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အနည်းငယ် ကြမ်းတမ်းပြီး အသံကွဲလွဲနေပါသည်။အသံနှင့် ဗီဒီယိုများတွင် စက္ကန့်အတော်ကြာ အနှောင့်အယှက်များ ရှိနေပြီး၊ ထို့နောက် ဘရောက်ဆာကို ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်ပြီး ဗီဒီယိုစီးကြောင်းတွင် နှောင့်နှေးမှုရှိသည်။
ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များ Tinychat ၏ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်မှာ EtherPad Lite (ဗီဒီယိုဝင်းဒိုးအောက်ရှိ စာရွက်တစ်ရွက်ဖြင့် အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို စတင်နိုင်သည်)။ဤဘလောက်တွင်၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင်ပါဝင်သူတိုင်းသည် မှတ်စုများယူနိုင်ပြီး၊ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေသည်။ထို့အပြင် ပါဝင်သူများ၏ မှတ်စုများကို သီးခြားအရောင်ဖြင့် ပြသမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှည်လျားသော ဆွေးနွေးမှုများအတွက် Tinychat သည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှ ဝေးကွာသည်။ဒါပေမယ့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုအတွက် လူတွေကို အလျင်အမြန်စုဆောင်းဖို့လိုရင် ဒါဟာ အဖြေကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ထို့အပြင်၊ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် စကားပြောခြင်းထက် စာရေးခြင်းပိုမိုလိုအပ်သော ပရောဂျက်များတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
AIM AVတပ်ဆင်ခြင်းAIM ၏ AV ဝန်ဆောင်မှုအသစ်သည် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အပြိုင်အဆိုင်ရှိနေရန် AOL ၏ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူလေးဦးအထိ အုပ်စုငယ်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လွယ်ကူပြီး အဆင်ပြေသောနည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။
စကားစမြည်စတင်ခြင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်- သင်သည် အသက် 13 နှစ်ကျော်ကြောင်း အတည်ပြုရုံဖြင့် AV သည် သင့်အား ချတ်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်၊ စနစ်သည် နောင်လာမည့် အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူများထံ ဆက်သွယ်ရန် လိုအပ်သည့် URL တစ်ခုကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း Mac အသုံးပြုသူများသည် Mac OS 10.6 နှင့်အထက် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Adobe Flash ဗားရှင်းကို ထည့်သွင်းရန် နှိုးဆော်ခံရနိုင်သည်။ ကျန်များအတွက်၊ ၎င်းသည် ထည့်သွင်းပြီးသား ဖြစ်နိုင်ချေများသောကြောင့် အပိုဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် စာရင်းသွင်းရန် မလိုအပ်ဘဲ AIM ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ဗီဒီယို မျက်နှာပြင်နှင့် အရည်အသွေးAV ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စမ်းသပ်မှုတွင်၊ ဗီဒီယိုသည် အခြားဝန်ဆောင်မှုများထက် များစွာဆိုးရွားပါသည်။အသံထုတ်လွှင့်မှု ကောင်းမွန်သော်လည်း ဗီဒီယိုစီးကြောင်းသည် မကြာခဏ ရပ်နေပါသည်။Service reboot လည်း ဘာမှမပေးပါဘူး။ထို့အပြင်၊ chat room ကို ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်၊ စမ်းသပ်မှုတွင် နှစ်ဦးသာ ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ပါဝင်သူ သုံးဦးကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များ၎င်းတို့သည် အတော်လေး ကျိုးနွံသည် - စာတိုချတ်နှင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခု၏ စခရင်ပုံများကို ရိုက်ယူနိုင်စွမ်း။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း AV အရည်အသွေးသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်တာဗျူးများ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများအတွက် မသင့်လျော်ပါ။ သို့သော်လည်း AV သည် လူလေးဦးအထိ အုပ်စုငယ်တစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ရိုးရှင်းပြီး အလိုလိုသိသာသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် အပိုဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို လျင်မြန်စွာစီစဉ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သောနည်းပညာအသိပညာဖြင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမခံရသော ဆွေမျိုးများ သို့မဟုတ် အသိမိတ်ဆွေများနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လွယ်ကူစေသည်။
AnyMeetingတပ်ဆင်ခြင်းအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု AnyMeeting သည် သင့်အား လူခြောက်ဦးအထိ တစ်ပြိုင်နက် အသုံးပြုနေသော ဗီဒီယိုချတ်တစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကြည့်ရှုသူများအနေဖြင့် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တွင် လူ ၂၀၀ အထိ ပါဝင်နိုင်သည်။ချတ်စတင်ရန်၊ သုံးစွဲသူတစ်ဦးတည်းသာ ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရပါမည် (များသောအားဖြင့် ချတ်စီစဉ်သူ)။ပါဝင်သူများကို ဖိတ်ကြားရန်၊ Start Webinar ကို နှိပ်ရုံဖြင့်၊ အောက်ခြေ Toolbar တွင်ရှိသော Start mic & cam ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီးနောက်၊ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့် စတင်ပါမည်။ \_
အစပိုင်းတွင်၊ AnyMeeting သည် ပြင်ဆင်မှုဝင်းဒိုးကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။သင့်အသွင်အပြင်ကို အပြီးသတ်ထိပေးပြီးနောက်၊ ငါအဆင်သင့်ဖြစ်နေသောခလုတ်ကို နှိပ်ပါက ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ခန်းတွင် သင့်ကိုယ်သင် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Video Interface နှင့် QualityAnyMeeting သည် Mac အဟောင်းများတွင် အလုပ်မလုပ်သော အခြားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ AV ကဲ့သို့ပင်၊ ၎င်းသည် Mac OS 10.6 နှင့်အထက်အတွက် ထည့်သွင်းရန် Adobe Flash လိုအပ်သည်။ သို့သော် ဂိမ်းသည် ဖယောင်းတိုင်နှင့် ထိုက်တန်သည်- ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုသည် Google Hangouts သို့မဟုတ် Skype မှပေးဆောင်သည့်အရာထက် မနိမ့်ကျပါ။ ဗီဒီယိုနှင့် အသံထုတ်လွှင့်ခြင်း၏ အရည်အသွေးသည် အလွန်အကျွံ "သတ္တုဓာတ်" နှင့် ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
အ ပိုဆောင်းအင်္ဂါရပ်များ AnyMeeting သည် ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များ ကြွယ်ဝသည်။ တင်ဆက်မှုများ၊ ကွန်ဖရင့်ပို့စ် အချက်အလက်များအတွက် ဖန်သားပြင်များကို သင်ပြသနိုင်သည် သို့မဟုတ် "ဖုန်းဖြင့်တွေ့ဆုံခြင်း" အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာကို လက်ရှိအသုံးပြုခွင့်မရရှိသူများသည် ဖြစ်ရပ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုက်လျှောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ညီလာခံစီစဉ်သူသည် တက်ရောက်သူများစာရင်းကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး တက်ရောက်သူများသည် ၎င်းတို့၏သဘောထားနှင့် ကိုက်ညီသည့် My mood menu မှ အိုင်ကွန်တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ စာသားချတ်၊ ဗီဒီယိုနှင့် အသံတို့ကို ပိတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ရနိုင်စေနိုင်သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သူငယ်ချင်းများ သို့မဟုတ် မိသားစုဆက်သွယ်ရေးအတွက်၊ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပြည့်နေသော်လည်း လုပ်ငန်းအစည်းအဝေးများနှင့် တင်ဆက်မှုများအတွက် ကောင်းမွန်ပါသည်။ဤနေရာတွင် ၎င်း၏ အရေးကြီးဆုံး အားသာချက်မှာ ညီလာခံကို စီစဉ်သူသာလျှင် မှတ်ပုံတင်သင့်သည်။ကျန်ပါဝင်သူများသည် ၎င်းတို့ထံသို့ ဖိတ်ကြားချက်ပေးပို့ထားသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာကို ရိုက်ထည့်ရုံဖြင့် စကားပြောခန်းထဲသို့ ဝင်ပါ။
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဒါဆို အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုက ဘာလဲ။သူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုက မင်းရဲ့လက်ရှိပန်းတိုင်တွေပေါ်မှာ မူတည်တယ်လို့ ငါတို့ထင်ပါတယ်။Google Hangouts နှင့် Skype တို့သည် လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် အင်္ဂါရပ်ကြွယ်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းတို့အားလုံးသည် Google သို့မဟုတ် Skype အကောင့်များရှိသည့် အုပ်စုငယ်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။Hangouts သည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း အသံအရည်အသွေးသည် သင့်အတွက် အရေးကြီးပါက Skype ကို ဦးစားပေးသင့်သည်။သင့်တွင် အချိန်အကန့်အသတ်ရှိပြီး မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမျှ မထည့်သွင်းဘဲ ချက်တင်ကို အရေးတကြီးလိုအပ်ပါက AIM မှ Tinychat သို့မဟုတ် AV သည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည် ၎င်းတို့ထံ ပေးပို့ထားသော URL ကို နှိပ်ရုံဖြင့် ၎င်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ထို့အပြင် ဝန်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Tinychat သည် အသံဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းထက် စာရွက်စာတမ်းများကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်ပါသည်။ AV ဝန်ဆောင်မှုသည် စာရင်းသွင်းရန်ပင်မလိုသော ဆွေမျိုးများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ AnyMeeting သည် လူ 200 အထိ ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုတစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်ကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့် ကြီးမားသောစီးပွားရေးကွန်ဖရင့်များအတွက် ကောင်းမွန်သောပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ညီလာခံကျင်းပသူသာလျှင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထံ စာရင်းပေးသွင်းသင့်သည်။ ထပ်လောင်းအင်္ဂါရပ်များ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း ဒါမှမဟုတ် မိသားစုနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့အခါ သိသိသာသာ မလိုအပ်ပါဘူး။
လူတစ်ဦးသည် လူမှုဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ဆက်သွယ်ရေးသည် သူ၏ဘဝတွင် အလွန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ရံဖန်ရံခါတွင် သီးသန့်လူသည် တစ်ယောက်ယောက်နှင့် စကားပြောရန် လိုအပ်သည်။ထို့အပြင် ထိရောက်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်သော စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲ အလုပ်နှင့် စီးပွားရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။
ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ အသိအကျွမ်းတွေနဲ့ တက်ကြွစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။သို့သော် ခေတ်သစ်လက်တွေ့တွင်မူ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရက်ချိန်းယူရန် အချိန်ရှာရန်၊ ၎င်းကို ပေါ်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝင်စားသော စကားဝိုင်းတစ်ခုအကြောင်း ဆွေးနွေးရန် အချိန်ယူရန် မကြာခဏ ခက်ခဲနေပါသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အင်တာနက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် အခိုင်အမာနှင့် လေးနက်စွာဝင်ရောက်လာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်ရေးအများစုသည် virtual reality သို့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ရှိ သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံသို့ အီးမေးလ်များ ပေးပို့ပါသည်။
မကြာသေးမီက၊ အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်တစ်ခု ပေါ်လာပြီး ၎င်းသည် ဝဘ်ကင်မရာတစ်ခုရှိပြီး ပုံမှန်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသည့် လူတိုင်းအတွက် သွားလာမှုကန့်သတ်ချက်မရှိပေ။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို လက်ရှိတွင် ဝဘ်ပေါ်ရှိ ဆိုက်များစွာက ကမ်းလှမ်းထားသည်။အသုံးပြုသူအတွက် ကျန်ရှိနေသော အရာအားလုံးသည် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည်။ဥပမာအားဖြင့် မှတ်သားဖွယ်မှာ အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်ဝန်ဆောင်မှု http://pentavideo.ru ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်တွင် အဆင်ပြေပြီး အလိုလိုသိနိုင်သော interface ပါရှိပြီး၊ ၎င်းအပြင်၊ ၎င်းသည် လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူအများစုအတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချတ်သည် သင့်အား စကားဝိုင်းမုဒ်တွင် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် လူအများအပြားနှင့် စကားပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။နောက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်ကြောင့် ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ဝေးလံခေါင်သီသောရုံးများနှင့် ဌာနခွဲများနှင့် အစည်းအဝေးများကျင်းပရန် ဗီဒီယိုချတ်များကို အသုံးပြုကြသည်။
အမည်တွင် အကြံပြုထားသည့်အတိုင်း ဗီဒီယိုချတ်သည် ဗီဒီယိုဖော်မတ်ဖြင့် စကားစမြည်ပြောဆိုနိုင်သည့် စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။တစ်နည်းဆိုရသော် သင်သည် သင်၏ စကားဝိုင်းကို ကြားရုံသာမက ဗီဒီယို ကင်မရာဖြင့်လည်း မြင်နိုင်သည်။
ယေဘူယျအားဖြင့် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုချက်တင်များအတွက် လိုအပ်ချက်မြင့်မားခြင်းနှင့် အထူးသဖြင့် http://pentavideo.ru ဝန်ဆောင်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသည် စိတ်ခံစားမှုများကိုဖော်ပြရန် အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။အထူးသဖြင့် စကားပြောဆိုမှုသည် စာပေးစာယူမုဒ်တွင် ဖြစ်နေပါက၊ အထူးသဖြင့် တက်ကြွသောဆက်သွယ်ရေးသည် သင့်လက်ချောင်းများကို ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော် အွန်လိုင်း ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးသည် ရင်းနှီးဖော်ရွေစွာသာမက စီးပွားရေးဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပါ ပို၍ရေပန်းစားလာပါသည်။ထို့ထက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ထို့ကြောင့် ဥပမာအားဖြင့်၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန် သို့မဟုတ် အားလပ်ရက်တွင် မန်နေဂျာတစ်ဦးသည် ၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ အလုပ်များကို အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ဟုတ်ကဲ့၊ လိုအပ်ပါက လက်အောက်ငယ်သားများသည် ထင်ရှားသောပြဿနာတစ်ခုခုအတွက် သူနှင့် တိုင်ပင်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်။
ဗီဒီယိုချတ်အသုံးပြုခြင်း၏ အဓိကအားသာချက်အားလုံးကို အကျဉ်းချုပ်ဆိုပါက၊ ဦးစွာ၊ အောက်ပါ အရေးကြီးသောအချက်များကို သတိပြုသင့်သည်-
- ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကို ချွေတာခြင်း၊
အကယ်၍ သင်သည် ဗီဒီယိုကင်မရာမှတဆင့် အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုပုံစံကို တစ်ခါမှအသုံးမပြုဖူးပါက၊ စမ်းသုံးကြည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။မင်းစိတ်ပျက်မှာသေချာတယ်။
Vesti.net- Microsoft Teams ဗီဒီယိုချတ်သည် ပါဝင်သူများကို virtual space တစ်ခုတွင် နေရာချပေးမည်ဖြစ်သည်။
Microsoft သည် ၎င်း၏ Teams video conferencing ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အကြီးစားအပ်ဒိတ်တစ်ခုကို ကြေညာခဲ့သည်။အဓိက တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ Together Mode အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည် - ၎င်းကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုအစကတည်းက အထူးသဖြင့် အဝေးမှအလုပ်လုပ်ပြီး စာကျက်နေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
မုဒ်သည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံးကို ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင် ရှိနေကြောင်း ခံစားချက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။AI အခြေခံ အပိုင်းခွဲခြင်းနည်းပညာသည် ပါဝင်သူ၏ကိုယ်ပွားကို ယေဘူယျနောက်ခံသို့ ရွှေ့သည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ လူ ၄၉ ဦး တစ်ပြိုင်နက် စုဝေးနိုင်သည့် စာသင်ခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ ကြည့်နိုင်သည်။စားပွဲဝိုင်းများနှင့် အလုပ်ရုံများအတွက် အခြားသော နောက်ခံပုံများကိုလည်း ပေးထားသည်။
Together Mode သည် လက်ရှိတွင် beta တွင်ရှိနေပြီး ကုမ္ပဏီမှ ၎င်းအား သြဂုတ်လတွင် Teams အသုံးပြုသူများအားလုံးထံ ထုတ်ပေးမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ဗီဒီယိုများအတွက် စစ်ထုတ်မှုများကို Teams တွင်လည်း ရနိုင်ပါမည်။အစမ်းကြည့်ရှုသည့်အခန်းတွင်၊ အသုံးပြုသူသည် အစည်းအဝေးမ၀င်မီ အလင်းရောင်အဆင့်ကို ချိန်ညှိရန်နှင့် ကင်မရာ၏အာရုံကို ပျော့ပျောင်းစေရန် စစ်ထုတ်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။ဥပမာ၊ သင့်နောက်ကွယ်ရှိ နောက်ခံကို မှုန်ဝါးစေရန် သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်မွမ်းမံမှုမှာ Dynamic View ဖြစ်သည်။Microsoft ကပြောသည့်အတိုင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများကို တူညီသောစခရင်ပေါ်တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြသရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ချတ်မက်ဆေ့ချ်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုလည်း အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။Microsoft Teams အစည်းအဝေးတစ်ခုအတွင်း ပေးပို့လိုက်သော ဤစာများအားလုံးသည် ချတ်အကန့်ကို သီးခြားဖွင့်စရာမလိုဘဲ လူတိုင်း၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ထပ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခု - ဘာသာပြန်ပါ စာတန်းများ။ပါဝင်သူများသည် စကားပြောဆိုချက်များကို အခြားဘာသာစကားများမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဘာသာပြန်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ကွန်ဖရင့်များသည် ဘာသာစကားတစ်ခုတည်း မပြောတတ်သူများကို အချင်းချင်း ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၊ Microsoft သည် သင်ပြောခဲ့သည့်အရာများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်စေမည့် အစည်းအဝေးများ၏ စာသားမှတ်တမ်းများကို ထည့်သွင်းရန် ကတိပြုထားသည်။အစည်းအဝေးပြီးနောက်၊ အဆိုပါအစည်းအဝေးအတွက် ချက်တင်တက်ဘ်တွင် စာသားမှတ်တမ်းဖိုင်အပြည့်အစုံကို အလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းသွားပါမည်။
မကြာမီအချိန်အတွင်း Teams သည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ 1,000 နှင့် presentations များကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် လူ 20,000 အထိ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည်ဟု Microsoft မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းအတွက်၊ ကုမ္ပဏီသည် Cortana ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်ကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။၎င်းသည် သင့်အား သီးခြားလူတစ်ဦးထံသို့ အဆက်အသွယ်မဲ့ခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်၊ အသုံးပြုသူကို အချိန်ဇယားဆွဲထားသော အစည်းအဝေးတစ်ခုသို့ ချိတ်ဆက်ရန်၊ မက်ဆေ့ချ်များကို ညွှန်ကြားပြီး ၎င်းတို့ကို ပေးပို့နိုင်သည့်အပြင် ကွန်ဖရင့်ချတ်တွင် လိုအပ်သောဖိုင်များကိုလည်း ကူညီပေးပါမည်။
Jivo တွင်အသစ်- ဗီဒီယိုချတ်၊ အကောင့်စာရင်းအင်းများနှင့် chatbots အတွက် ပံ့ပိုးပေးသူအသစ်
Jivo နှင့် အလုပ်ကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူစေပြီး ရောင်းအားတိုးလာစေမည့် အသုံးဝင်သော ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
ဗီဒီယိုချတ်မှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများနှင့် အလုပ်တွဲလုပ်ပါ။
VideoForce နှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ပြိုင်ဆိုင်မှုမှ ပေါ်လွင်စေမည့် အဖြေတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည် - ယခု သင်သည် လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့ ဆိုက်၏ဖောက်သည်များနှင့် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ပရိုမိုကုဒ်VF2022ကို 03/01/2022 အထိ အသုံးပြုပြီး VideoForce လုပ်ဆောင်ချက်အစုံအလင်ကို ရက်ပေါင်း 30 အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရယူလိုက်ပါ။
"အကောင့်အခြေအနေ" ကဏ္ဍတွင် စာရင်းဇယားများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပါ။
ယခု ကဏ္ဍ "အကောင့်အခြေအနေ" တွင် သင်သည် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဒေတာကို စုဆောင်းပြီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ဤနေရာတွင် သင်ပြင်ဆင်ထားသော စစ်ထုတ်မှုများဖြင့် ဒိုင်ယာလော့ခ်များနှင့် ခေါ်ဆိုမှုများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။
စာရင်းအင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး ဤအညွှန်းကိန်းများကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအသစ်များမှတဆင့် chatbot များကိုချိတ်ဆက်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် chatbot ဖန်တီးနိုင်သည့် ပါတနာစာရင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက် တိုးချဲ့ထားပါသည်။ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Dahi.ai နှင့် Metabot ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
chatbot သည် ပံ့ပိုးမှုရယူမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အရောင်းမြှင့်တင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။Dahi.ai နှင့် Metabot ဝန်ဆောင်မှုများ၏အကူအညီဖြင့်၊ သင်သည် bot ကိုလွတ်လပ်စွာစီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်သည်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်ထည့်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အဆင်သင့်လုပ်ထားသော script များကိုအသုံးပြုကာ Jivo သို့ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
Metabot ၏အကျိုးကျေးဇူးများ- scripting နှင့် speech recognition (NLU with Dialogflow) နှစ်မျိုးလုံးကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်သူ
- မေးခွန်းပုံစံများနှင့် စစ်တမ်းများကို စုဆောင်းရန်အတွက် Built-in ဒေတာဘေ့စ်
- အဆင့်မြင့်ဖောက်သည်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အလိုအလျောက်တဂ်လုပ်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ချက်တာဝန်ပေးခြင်း
- script များစတင်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့် autofunnels ဖန်တီးခြင်းအတွက် အစပျိုးမှုများ
- ပြင်ပ API နှင့် ပေါင်းစည်းရန် ကိရိယာများ
- bot တွင် built-in စတိုး
- Built-in ဇာတ်ညွှန်းရေးဘာသာစကား
- cloud တွင် သို့မဟုတ် ဆာဗာများတွင် ထည့်သွင်းခြင်း။
ကုန်ကျစရိတ်- အသုံးပြုသူအသစ်တိုင်းအတွက် တစ်လလျှင် ရူဘယ် 1000 မှ အခမဲ့ (အသုံးပြုသူ 100 အထိ)၊
Dahi အကျိုးကျေးဇူးများ- အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်
- အင်္ဂလိပ်နှင့်တူရကီအတွက် interface ကို။ရုရှကို ဘော့တ်ဒိုင်ယာလော့ခ်များတွင် ပံ့ပိုးထားသည်။
Vedomosti သတင်းလွှာများ - ပင်မစီးပွားရေးသတင်းများကိုမေးလ်ဖြင့်ရယူပါ။
ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် လူထုမီဒီယာ (Roskomnadzor) ၏ ကြီးကြပ်မှုအတွက် ဖက်ဒရယ်ဝန်ဆောင်မှု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ 2022 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်၊ EL နံပါတ် FS 77-79546
တည်ထောင်သူ- JSC "စီးပွားရေးသတင်းမီဒီယာ"
နှင့် ပတ်သက်.အယ်ဒီတာချုပ်- Kazmina Irina Sergeevna
Vedomosti သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာနှင့် အချက်အလက် ဖြည့်စွက်ခြင်း။ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် လူထုမီဒီယာ (Roskomnadzor) ၏ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဆိုင်ရာ Federal Service မှ 2022 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ 17 ရက်စွဲပါ PI No. FS 77 - 77720 နံပါတ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
မည်သည့်ပစ္စည်းများကိုမဆို အသုံးပြုခြင်းအား ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် vedomosti.ru သို့ ဟိုက်ပါလင့်ခ်တစ်ခုထံတွင်သာ ခွင့်ပြုသည်
သတင်းများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်များ၊ ခန့်မှန်းချက်များနှင့် ဤဆိုက်တွင်တင်ပြထားသော အခြားပစ္စည်းများသည် မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုမဆို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းချက် သို့မဟုတ် အကြံပြုချက်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိပါ။
ဝဘ်ဆိုက်သည် ဆိုက်အသုံးပြုသူများ၏ IP လိပ်စာများ၊ ကွက်ကီးများနှင့် ပထဝီဝင်တည်နေရာဒေတာကို အသုံးပြုသည်၊ အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒတွင်ပါရှိသည်။
© Business News Media JSC၊ 1999–2022
အာရှ-ပစိဖိတ်ဘဏ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ၁၂ နာရီတွင် Telegram ၌ "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစတော့ရှယ်ယာနှင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးစျေးကွက်အပေါ် ကပ်ရောဂါ၏သက်ရောက်မှု" ဗီဒီယိုချတ်သို့ ဖိတ်ကြားထားသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း၊ စတော့ဈေးကွက်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲများ ရှိခဲ့သည်။ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအပေါ် ဆက်လက်သက်ရောက်နေပါသည်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အကျပ်အတည်းကို ဘဏ္ဍာရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲ။ဖြစ်ရပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ရွေးချယ်စရာများကား အဘယ်နည်း။ကမ္ဘာ့ငွေကြေးများအတွက် သိုလှောင်မှုမှာ အဘယ်နည်း။
ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်၊ မော်စကိုစံတော်ချိန် ၁၂း၀၀ နာရီတွင် အာရှ-ပစိဖိတ်ဘဏ်၏ Telegram ချန်နယ် t.me/atb_su သည် "နိုင်ငံတကာ စတော့နှင့် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးဈေးကွက်အပေါ် ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှု" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဗီဒီယို chat webinar ကို လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
အာရှ-ပစိဖိတ် ဘဏ်၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဘဏ်လုပ်ငန်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗလာဒီမာ ဘူဒင်ကို က COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး မည်သို့ ပြုမူနေပုံ၊ အခြေအနေသစ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ရန် လိုအပ်မှုအပေါ် ငွေကြေး အာဏာပိုင်များ၏ တုံ့ပြန်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ မကြာမီကာလအတွင်း ငွေကြေးဈေးကွက်အပြောင်းအလဲ...
လူမျိုးစုံနှင့်။အွန်လိုင်းထုတ်လွှင့်မှုများကို ပြုလုပ်ရလွယ်ကူပြီး နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော နည်းလမ်းဖြင့် စီစဉ်သတ်မှတ်ထားသည်။သင်ချိတ်ဆက်ပြီး စကားစမြည်ပြောဆိုသူထံ ချက်ချင်းသွားပါ။ကြိုက်ရင် - မကြိုက်ရင် အချင်းချင်း သိလာမယ် - ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ မင်းရှေ့မှာ မျက်နှာအသစ်တစ်ခု ပေါ်လာတယ်။
ရွှင်မြူးစွာပြောဆိုခြင်း၊ စည်းနှောင်မှုမရှိသော ပရောပရေတာများ၊ ရုပ်ရှင်အသစ်များနှင့် ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးမှုများ၊ နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် "ဘဝအတွက်" ညသန်းခေါင်ကျော်ကြာ စကားပြောဆိုမှုများ။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ယနေ့ သင်မည်သည့် စိတ်ဓာတ်ရှိပါစေ၊ သင်သည် ဤနေရာတွင် သင့်လှိုင်းကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ငါတို့က သူငယ်ချင်း :)
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါက ငါတို့နဲ့ဖြစ်မယ်။မကြာခဏ။အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးသည် လက်တွေ့ဘဝထက် များစွာပို၍ ရိုးသားသည်ကို သင်မြင်ရသည်။ဤနေရာတွင် သင်သည် သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်ပြီး မည်သူနှင့်မှ လိုက်လျောညီထွေမဖြစ်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာ သင်နှင့် နီးစပ်သူအား စိတ်ဝိညာဉ်ဖြင့် ပိုင်းခြားသိမြင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ဆံပင်အရောင်၊ ရင်သားအရွယ်အစားနှင့် borscht ချက်ပြုတ်နည်းကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် သင်၏ရှာဖွေမှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ကောင်းပြီ၊ ကောင်းပြီ။ငါတို့နောက်နေတာ) ဒါပေမယ့် ငါတို့မိန်းကလေးတွေက တကယ်မိုက်တယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ရှာပါ၊ ဤသည်မှာ VIDEO ချတ်ဖြစ်သည်။
မတူတာတွေရှိတယ်။ဘရူနက်၊ ဆံပင်ရွှေရောင်၊ ခေါင်းနီများ။အားကစားသမားများ၊ ဂီတသမားများ၊ စတိုင်လ်သမားများ။ရှေ့နေများ၊ ပရိုဂရမ်မာများ၊ စစ်တပ်။စီးပွားရေးသမားများ၊ မန်နေဂျာများနှင့် အလုပ်သမားများ။ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ မြင်းဖြူပေါ်မှာ မင်းသားတွေ မရှိပါဘူး။ဒါပေမယ့် ငါတို့ကြည့်နေတယ် :)
လေးလေးနက်နက်၊ ဒီလိုမျိုး ဇာတ်ကားမျိုး တစ်ခါတလေ တွေ့လာရတယ်။ဂစ်တာတီးတာ၊ သီချင်းဆိုတာ၊ ဘီတာဘောက်စ်တွေ တီးတယ်။မရှက်ပါနဲ့ ။မင်းရဲ့အရည်အချင်းတွေကို ကမ္ဘာကိုပြသပါ။ဘယ်သူသိမှာလဲ၊ ထုတ်လုပ်သူတွေလည်း ဒီမှာပဲ တွဲနေတာဖြစ်နိုင်သည်)
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးနေ့ပွဲများကို ကျင်းပပြီး "ဇာတ်ဝင်ပါတီများ" ကို စီစဉ်ပြီး ၎င်းတို့၏ အကြိုက်ဆုံး ဘောလုံးအသင်းအတွက် အရင်းအနှီးပင် ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါဝင်ပါ!ပြီးနောက်၊ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် ပျော်ရွှင်မှုသည် ပို၍ပျော်စရာကောင်းသည်။
သူတို့က မင်းကို တွေ့ချင်နေတာ။သူတို့ဆီ အမြန်ဆုံး စာရေးပါ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများ ဆုံဆည်းနိုင်စေရန်အတွက် ဤဗီဒီယိုချတ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေးသည် ချတ်ပါဝင်သူအားလုံးအတွက် အပြန်အလှန်လေးစားမှုဖြစ်သည်။ဆဲဆိုခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ စော်ကားခြင်းနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို အရှက်ခွဲခြင်းစသည့် အယူအဆများကို ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ဤအရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအမြစ်ကို အသုံးပြုခြင်း၏ စည်းမျဉ်းများတွင် ကြေငြာထားသည်။သင်၏ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်မှုကို မစတင်မီ ၎င်းတို့ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
မေး- ဤဗီဒီယိုချတ်သည် အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်သာ ဖြစ်ပါသလား။
A: အရွယ်ရောက်ပြီးသူများသာ ဤနေရာတွင် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းသာမကဘဲ ကလေးများအား စကားဝိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
မေး- ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။
A- ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုချတ်တွင် ကျေးဇူးပြု၍ ယဉ်ကျေးစွာ ထောက်ထားပေးပါ။ပြီးတော့ သူတို့လည်း မင်းနဲ့အတူရှိလိမ့်မယ်။
မေး- ငါတို့က ယဉ်ကျေးပြီး သာယာတဲ့ ဆက်ဆံရေးအတွက်လား။
A: ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောဆိုတာမျိုးကို ဒီနေရာမှာ လက်မခံပါဘူး။ထို့အပြင် ညစ်ညမ်းသောဘာသာစကားကို အသုံးပြုရန်။ညစ်ညမ်းသောဘာသာစကားကိုမဆို တားမြစ်ထားသည်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော တခြားသူတွေကိုပါ လေးစားမှုရှိပါ။
မေး- အစွန်းရောက်တွေ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ တခြား စစ်သွေးကြွတွေရဲ့ စစ်သွေးကြွတွေ တောထဲကို ဖြတ်သန်းသွားသလား။
ဖြေ။ လူမျိုး၊ လူမျိုး၊ ဘာသာရေး ဂိုဏ်းဂဏ ကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တယ်။ထူးဆန်းတာက သူတို့ဟာ သူတို့အချင်းချင်း ဘုံဘာသာစကားကို ရှာကြတယ်။ထို့ကြောင့် တစ်စုံတစ်ဦးသည် သင့်အား စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါက အခြားစကားပြောဆိုသူထံ ပြောင်းလိုက်ပါ။
မေး- အခြားသူများ၏ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အဆက်အသွယ် အချက်အလက်များကို ချတ်သို့ ထုတ်လွှင့်ရန် တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားပါသလား။
A- ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကို အများပြည်သူသို့ လွှင့်တင်၍မရပါ။ရာဇ၀တ်မှုအချို့ကို သင်တွေ့မြင်မှသာ ဤကန့်သတ်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းသည်။
မေး- ဗီဒီယိုချတ်သည် ကြော်ငြာရန်နေရာမဟုတ်ပါလား။
A- သီးသန့်အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် သင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကမ်းလှမ်းပါ။စကားမစပ်၊ အခြားဆိုက်များကို ကြော်ငြာရန်လည်း တားမြစ်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုချတ်တွင် သင်သည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်သွယ်နိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို ခြေရာခံနိုင်မည်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသုံးပြုသူထုတ်လွှင့်မှုများအားလုံးကို အလိုအလျောက်မှတ်တမ်းတင်ပိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် လိုအပ်ပါက၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ရှာဖွေအရေးယူရန် ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။မေးစရာတွေရှိသေးလား။ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန် သင့်တွင် အကြံပြုချက်များ ရှိပါသလား။အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
WhatsApp တွင် အဖွဲ့လိုက် ဗီဒီယိုချတ်တစ်ခုကို ဖန်တီးနည်း
WhatsApp အတွက် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်သည် ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော အင်္ဂါရပ်ကို ယူဆောင်လာပါသည်- အုပ်စုအသံနှင့် ဗီဒီယိုချတ်များ ဖန်တီးနိုင်မှု။WhatsApp တွင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တစ်ခုကို မည်သို့စတင်ရမည် သို့မဟုတ် လူများစွာကို တစ်ပြိုင်နက် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးတွင် သင့်အား ပြောပြပါမည်။
WhatsApp Group ခေါ်ဆိုပုံ အလုပ်လုပ်ပုံ
ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် မရရှိနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းကို မတူညီသော ဒေသများအတွက် တဖြည်းဖြည်း ဖွင့်ပေးနေသည်။WhatsApp ၏ လက်ရှိဗားရှင်းကို ထည့်သွင်းထားသူများသာ အုပ်စုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အပလီကေးရှင်း၏ ဗားရှင်းအသစ်တွင် အသံခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအတွင်း၊ သင်သည် အခြားသူတစ်ဦးကို ကုမ္ပဏီသို့ သင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရန် ဖိတ်ကြားနိုင်သည်။ဆိုလိုသည်မှာ၊ အသံချတ်တွင် လူ ၃ ယောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆက်အသွယ်လေးခုအထိကြားတွင် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ချတ်တွင် နောက်ထပ်လူနှစ်ဦးကို သင်ထည့်နိုင်သည်။
ကွန်ဖရင့်တစ်ခုတွင် လူလေးဦးထက်ပို၍ ပေါင်းစပ်လိုလျှင် အခြားပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြုပါ။သီးခြားဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် ဗီဒီယိုချတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးသည် လူတိုင်း၏ လူမှုဘဝတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။သို့သော် ယနေ့ခေတ်တွင် နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် အွန်လိုင်းတွင် သင်စိတ်ဝင်စားသည့် အကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ စကားဝိုင်းတစ်ဦးနှင့် ဆွေးနွေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။လျှင်မြန်စွာ ရေပန်းစားလာသော ဗီဒီယိုချတ်များသည် ၎င်းကို ပြီးမြောက်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အဲဒါတွေကဘာလဲ?၎င်းသည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမှတဆင့် ဗီဒီယိုနှင့် အသံအချက်အလက်များကို ပြန်ဖွင့်ပေးသည့် ဗီဒီယိုချတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်း၏ထူးခြားချက်မှာ အပြန်အလှန်ပြောဆိုသူနှစ်ဦးထက်ပို၍ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ဗီဒီယိုချတ်စတင်ရန် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော ကွန်ပျူတာ၊ အလုပ်လုပ်သည့် flash-player၊ ဝဘ်ကင်မရာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့် နားကြပ်များ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
လက်တွေ့ဘဝ၏လေထုကို အမြင်အာရုံဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် ဗီဒီယိုချက်တင်မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် သာမန်လူနေမှုဘဝတွင် စကားပြောဆိုမှုထက် ယုတ်ညံ့မည်မဟုတ်ပေ။ ချတ်ကစားတဲ့လူငယ်တွေကြားမှာ အထူးသဖြင့် ၀ယ်လိုအားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သင်ပျော်စရာကောင်းပြီး ကမ္ဘာ့နေရာအသီးသီးက သူငယ်ချင်းအသစ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်စေမှာပါ။ ဆိုက်၏စနစ်သည် စကားစမြည်ပြောဆိုသူတစ်ဦးကို မရွေးချယ်မီ၊ ဥပမာ၊ အသက် သို့မဟုတ် နေထိုင်သည့်နိုင်ငံကို သင်အလိုရှိသော ကန့်သတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး၏ အဓိက အားသာချက်မှာ လူတစ်ဦးတွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော စိတ်ခံစားမှုများ နှင့် adrenaline အလျင်စလိုဖြစ်စေပြီး လက်တွေ့ဘဝတွင် ရှက်ရွံ့မှုပြဿနာများစွာရှိသောသူများပင် ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှု နည်းပါးလာစေရန် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ဗီဒီယိုချတ်သည် လူတိုင်းကို လွယ်ကူသော ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် စကားဝိုင်း၏လမ်းစဉ်သည် သင့်နှင့်မကိုက်ညီပါက အချိန်မရွေး အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
စာရင်းဇယားများကို သင်ယုံကြည်ပါက၊ ဗီဒီယိုချတ်များတွင် ဆက်သွယ်မှုဖြင့် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးတို့သည် နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည့် စုံတွဲအများအပြားကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် သင်၏ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် စိတ်အဖော်ကို အချိန်အတော်ကြာအောင် မတွေ့နိုင်ခဲ့ပါက သို့မဟုတ် သင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ထံမှ လုံလောက်သော အာရုံစိုက်မှု မရှိပါက၊ ကစားသော ချက်တင်သို့သာ သွားပါ။ဤနေရာတွင် သင်သည် သာယာသောစကားပြောဆိုနိုင်သော စကားနှင့်ပြောဆိုနိုင်သော စေ့စပ်ပေးသူအား သေချာပေါက်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်တွင် လက်တွေ့ဘဝတွင် အစည်းအဝေးတစ်ခုကို စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဗီဒီယိုချတ်များသည် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို သင်ယူလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်မည်ကို မမေ့ပါနှင့်။အမှန်တော့၊ သီအိုရီအခြေခံတွေကို နေ့တိုင်း စေ့စေ့စပ်စပ် တွေးကြည့်ရင်တောင် လက်တွေ့မပြဘဲ လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကို ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဗီဒီယိုချတ်သည် နိုင်ငံအသီးသီးမှ လူသန်းပေါင်းများစွာကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် သင်သည် လိုအပ်သော ဘာသာစကားအလေ့အကျင့်နှင့် သာယာသောဆက်သွယ်ရေးကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Microsoft Teams သည် ဇူလိုင်လတွင် end-to-end ကုဒ်ဝှက်ခြင်းကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ် မတ်လတွင် Microsoft သည် မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင် end-to-end encryption အတွက် ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်း Microsoft Teams ပလပ်ဖောင်းကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပါအင်္ဂါရပ်ကို ဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု မကြာသေးမီက ကြေညာခဲ့သည်။၎င်းကို အပြည့်အဝ ပေါင်းစပ်ရန် နှစ်ပတ်ခန့် ကြာပါမည်။
End-to-end encryption သည် အလယ်အလတ် node များဖြင့် စာဝှက်ခြင်းမပြုဘဲ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ကုဒ်ဝှက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။Microsoft Teams သည် အသုံးပြုသူများအား စကားဝှက်များကဲ့သို့သော အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ပိုမိုလုံခြုံစွာ လွှဲပြောင်းနိုင်စေမည့် ad hoc 2-party VoIP ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အဆုံးမှအဆုံး ကုဒ်ဝှက်စနစ် (E2EE) ကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။
MSPoweruserပေါ်တယ် အရ၊ ဤအင်္ဂါရပ်ကို သီးခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက် စီမံခန့်ခွဲသူများမှ ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။ထို့နောက် အသုံးပြုသူများသည် ဆက်တင်များ -> ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအောက်ရှိ End-to-End Call Encryption option ကို အသုံးပြု၍ အဆုံးမှအဆုံး ကုဒ်ဝှက်ခြင်းကို ဖွင့်နိုင်သည်။ခေါ်ဆိုမှု မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စာသားမှတ်တမ်းကို ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်ပါ။E2EE ခေါ်ဆိုမှုများသည် အသံ၊ ဗီဒီယို၊ မျက်နှာပြင်မျှဝေခြင်း၊ ချတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကဲ့သို့သော အခြေခံအင်္ဂါရပ်များကိုသာ ပံ့ပိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။
ခေါ်ဆိုသူနှင့် ခေါ်ဆိုမှုလက်ခံသူနှစ်ဦးစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ဆက်တင်များတွင် E2EE ကိုဖွင့်ထားမှသာ အသွင်ဝှက်ခြင်းလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။အဆုံးမှအဆုံးထိ ကုဒ်ဝှက်ခြင်းအား Teams ၏ ဝဘ်ဗားရှင်းတွင်သာမဟုတ်ဘဲ desktop နှင့် mobile client များတွင်သာ ရနိုင်ပါမည်။
Snapchat သည် ပြင်းထန်သော ကားမတော်တဆမှုဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
နာမည်ကြီး Snapchat messenger ကို တရားစွဲရန် သုံးနှစ်ကြာ အချည်းအနှီး ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက် ကားတိုက်မှုတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ မိဘများသည် လက်လှမ်းမမီသော ဝန်ဆောင်မှုကို တရားမျှတစေရန် ဆောင်ကြဉ်းရန် အခွင့်အလမ်းရှိသည်။အင်တာနက် ရင်းမြစ်တစ်ခု၏ ပိုင်ရှင်ကို အသုံးပြုသူများ ပို့စ်တင်ခြင်းအတွက် တာဝန်မှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးသော US Code of Laws ၏ နာမည်ဆိုးနှင့် မယိမ်းယိုင်သော "ပုဒ်မ 230" သည် အက်ကွဲသွားပုံရသည်။
Wisconsin၊ Walworth ကောင်တီတွင် 2022 ခုနှစ် မေလတွင် Snapchat တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရိုက်ကူးကာ ကားမတော်တဆမှုတစ်ခုတွင် လူငယ်သုံးဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သတိပေးပါမည်။ သေဆုံးသူတစ်ဦး၏မိဘများအဆိုအရ ယာဉ်မောင်းသည် Snapchat ကိုအသုံးပြု၍ ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းကိုဖမ်းယူကာ စာရင်းသွင်းသူများနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်အောင်မြင်မှုများကို မျှဝေရန် ယာဉ်မောင်းသည် တစ်နာရီလျှင် 123 မိုင်နှုန်းဖြင့် အရှိန်မြှင့်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် မဟုတ်ပါက ထိုသို့သော မိုက်မဲမှုမျိုးကို ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
အမှန်မှာ Snapchat သည် လူကြိုက်များသောလုပ်ဆောင်ချက်များထဲတွင် "speed filter" ဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်မှုအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော filter များကို အွန်လိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ ပရိုဂရမ်သည် GPS အာရုံခံကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာ၏တည်နေရာကို ခြေရာခံပြီး ဗီဒီယိုပေါ်ရှိ အမြန်နှုန်းတန်ဖိုးကို ပြသပေးပါသည်။ ထိုသို့သောကိရိယာများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများအတွက် ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုက တာဝန်ယူသင့်သည်ဟု မိဘများက ယုံကြည်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများကို မျက်ကွယ်တွင် စိတ်ပျက်ဖွယ်အရာများပြုလုပ်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟု မိဘများက ယုံကြည်ကြသည်။
အနည်းဆုံး Snapchat ကိုယ်စားလှယ်များကို တရားရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်ရန် ပထမဆုံး ကြိုးပမ်းမှုမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ဤနည်းပညာကုမ္ပဏီများသည် "ပုဒ်မ 230" ၏ အကာအကွယ်အောက်တွင် ကျရောက်နေပြီး ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း အသုံးပြုသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် တာဝန်မှ လုံးဝကင်းလွတ်ကြောင်း ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေမျိုးတွင် မသင့်လျော်သော အကြောင်းအရာများကို ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှာ ကိစ္စမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်၊ Ninth Circuit အတွက် US အယူခံတရားရုံးသည် လျှောက်လွှာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပယ်ချပြီး အမှုကို ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ ပယ်ချခဲ့သည်။
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော "ပုဒ်မ 230" ကို ကျော်လွှားရန် နှစ်အတော်ကြာ အချည်းနှီးကြိုးစားပြီးနောက် တရားလိုများသည် Snapchat သည် သုံးစွဲသူများအား အန္တရာယ်နှင့် လက်မခံနိုင်သော လုပ်ရပ်များကို ကျူးလွန်ရန် ဆွဲဆောင်နေသည်ဟု ယူဆပါက တရားရုံးတွင် တရားစွဲနိုင်သည်။ . ဝန်ဆောင်မှုသည် သုံးစွဲသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် တာဝန်မကင်းသော်လည်း မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုမဆို လုပ်ဆောင်ရန် လှုံ့ဆော်မှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခြေအနေဟာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့တဲ့အဆင့်ကို ရောက်နေပါပြီ - ဥပဒေဟာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်လို့၊ အဲဒါကို ညင်သာစွာ ထားဖို့ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို အခုအချိန်မှာ လုံးဝမှန်ကန်တယ်လို့ မယူဆနိုင်ပါဘူး။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဗျူရိုကရေစီ နှောင့်နှေးမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး တရားရုံးများသည် ထိုသို့သော ကိစ္စများတွင် တိုက်ရိုက် မည်သို့မျှ မလုပ်နိုင်ပေ။ဤအခြေအနေသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ကျယ်ပြောသော ပဲ့တင်ထပ်မှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး Clarence Thomas သည် ရှုပ်ထွေးသော အမှုကို စိတ်ဝင်စားလာသည် - ဆိုလိုသည်မှာ Snapchat ကို ဆင့်ခေါ်စာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဒဏ်ရာရသူများကိုပင် အမှုကို အနိုင်ယူရန် အခွင့်အရေးတိုင်း ရှိနေပါသည်။ ပါတီ။ထို့အပြင် အမှုတွဲတစ်ခုတွင် အောင်ပွဲခံခြင်းသည် ယခင်ကလည်း တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှောင်လွှဲပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် ဆန့်ကျင်သော ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများအား တရားမျှတမှု ဖော်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အလားအလာများ ပွင့်လာစေမည်ဖြစ်သည်။
Microsoft Teams သည် အဆုံးမှ အဆုံး ကုဒ်ဝှက်စနစ်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တင်ပြမှုစွမ်းရည်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Microsoft သည် ၎င်း၏ကော်ပိုရိတ် Microsoft Teams ပလပ်ဖောင်းကို ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး ၎င်းတွင် အင်္ဂါရပ်သစ်များစွာကို မကြာမီ ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ပထမဦးစွာ၊ end-to-end encryption သည် နောက်ဆုံးတွင် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်၏ ဆက်တင်များနှင့် စွမ်းရည်များကို ကွဲပြားစေမည်ဖြစ်သည်။
Microsoft Teams ရှိ end-to-end ကုဒ်ဝှက်ခြင်းအင်္ဂါရပ်၏ beta ဗားရှင်းသည် ပလပ်ဖောင်း၏ စီးပွားရေးအသုံးပြုသူများအတွက် ယခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ပါဝင်သူနှစ်ဦးနှင့်အတူ အချိန်ဇယားမဆွဲထားသော ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ၎င်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။အနာဂတ်တွင်၊ ပါဝင်သူအများအပြားဖြင့် စီစဉ်ထားသော ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်များအတွက် အဆုံးမှအဆုံး ကုဒ်ဝှက်စနစ်ကို မိတ်ဆက်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။
Microsoft Teams သည် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက် အဆုံးမှအဆုံး ကုဒ်ဝှက်စနစ်ကို လောလောဆယ် မပံ့ပိုးပါ။ ဒေတာကို အကူးအပြောင်းနှင့် သိုလှောင်မှုတွင် ကုဒ်ဝှက်ထားပြီး၊ ၎င်းကို ကုဒ်ကုဒ်ဖျက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ချန်ထားနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် သိမ်းဆည်းထားသောဒေတာကိုကာကွယ်ရန် SharePoint ကုဒ်ဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီး Microsoft Teams တွင်သိမ်းဆည်းထားသောမှတ်စုများအတွက် OneNote ကုဒ်ဝှက်ခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် သိုလှောင်မှုအတွင်း ချတ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုလည်း ကုဒ်ဝှက်ထားသည်။ Microsoft Teams ၏ အဓိကပြိုင်ဖက်ဖြစ်သော Slack သည်လည်း အဆုံးမှအဆုံးထိ ကုဒ်ဝှက်ခြင်း ကင်းမဲ့နေသည်။ Zoom ဝန်ဆောင်မှုသည် ယမန်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် နည်းပညာကို စတင်ပေါင်းစပ်ခဲ့သည်။
တင်ဆက်မှုမုဒ်အသစ်သုံးမျိုးသည်လည်း Microsoft Teams ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဆက်တင်များတွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။သတင်းထောက်မုဒ်သည် စောင့်ကြည့်သူအတွက် အမြင်အာရုံအဖြစ် စပီကာ၏မျက်နှာဘေးတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာကို ဘောင်ခတ်ခွင့်ပြုပါမည်။အလားတူ ချဉ်းကပ်မှုကို ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းဖော်ပြမှုတွင် အသုံးပြုသည်။
ထူးခြားသောမုဒ်သည် သင့်မျက်နှာကို မျက်နှာပြင်ဧရိယာတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသော တင်ပြထားသောအကြောင်းအရာ၏ထိပ်တွင် နေရာချနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။တတိယမြောက် ဘေးချင်းကပ်မုဒ်တွင် တင်ပြသည့်အကြောင်းအရာ၏ဘေးတွင် စပီကာ၏မျက်နှာကို နေရာပေးသည်။Standout မုဒ်သည် ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင် Microsoft Teams သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ပြီး အခြားမုဒ်နှစ်ခုသည် နောက်ပိုင်းတွင် ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
Microsoft သည် Teams အတွက် PowerPoint Live plugin ကို ယနေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။၎င်းသည်တင်ဆက်သူနှင့်အခြားညီလာခံတက်ရောက်သူများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် PowerPoint တင်ဆက်မှုများကိုရိုးရှင်းစေသည်။
တင်ဆက်သူများသည် ယခု ပြတင်းပေါက်တစ်ခုတွင် ချတ်၊ မှတ်စုများနှင့် ဆလိုက်များကို မြင်နိုင်ပြီး အခြားအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်သူများသည် တင်ပြထားသောဆလိုက်များကို လွတ်လပ်စွာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Tinder ပိုင်ရှင်သည် ကိုရီးယား ဗီဒီယို ဝန်ဆောင်မှု ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ Hyperconnect ကို ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။
Tinder ကိုပိုင်ဆိုင်သည့် Match Group သည် ကိုရီးယားဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Hyperconnect ကိုဝယ်ယူကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။သဘောတူညီချက် ပမာဏမှာ ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံဖြစ်သည်။၎င်းသည် Match Group သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ဝယ်ယူမှုဖြစ်သည်။
ကိုရီးယား developer သည် အဓိက အက်ပ်နှစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်သည်- Azar သည် အသံနှင့် ဗီဒီယို ချတ်လုပ်ရန်အတွက် ဖြစ်ပြီး Hakuna Live သည် အွန်လိုင်း တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ဖြစ်သည်။ကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည် အမြတ်အစွန်းများပြီး 2022 တွင် ဝင်ငွေဒေါ်လာ သန်း 200 အထိရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း Match Group မှပြောကြားခဲ့သည်။ဒါက အရင်နှစ်တွေထက် ၅၀% ပိုပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုများသည် အာရှဈေးကွက်တွင် အထူးရေပန်းစားသောကြောင့် ဝင်ငွေ၏ 75% သည် အာရှဒေသခံများထံမှဖြစ်သည်။
Hyperconnect သည် ၎င်း၏ ဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများကြောင့်လည်း နာမည်ကြီးသည်။ကုမ္ပဏီသည် WebRTC ၏ "ပထမမိုဘိုင်းဗားရှင်း" ဟုခေါ်သည့်အရာကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ဆာဗာများကိုအသုံးမပြုဘဲ မိုဘိုင်းလ်အသုံးပြုသူများ တိုက်ရိုက်သက်တူရွယ်တူအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။၎င်းသည် အသုံးပြုသူ၏လုံခြုံရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူအပေါ်ပိုင်းကို လျှော့ချပေးသည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ အခြားသောနည်းပညာသည် မတူညီသော ဘာသာစကားအုပ်စုများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို ဆက်သွယ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။၎င်းသည် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဘာသာပြန်ခြင်းကို အသုံးပြု၍ စကားစမြည်ပြောဆိုရန်နှင့် တုံ့ပြန်နိုင်စေပါသည်။ဤအင်္ဂါရပ်ကို Azar ဝန်ဆောင်မှုတွင် အသုံးပြုထားသည်။
မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် Match Group မှ Hyperconnect ရယူခဲ့သည်ကို မဖော်ပြထားပါ။Techcrunch သတင်းထောက်များသည် ကုမ္ပဏီသည် အနာဂတ်တွင် Tinder နှင့် အခြားသော ချိန်းတွေ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင် နည်းပညာကို ပေါင်းစပ်နိုင်သည်ဟု ထင်ကြေးပေးကြသည်။သဘောတူညီချက်ကို 2022 ခုနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် အပြီးသတ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
Zoom သည် တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများ၏ စာရင်းအင်းများကို လွဲမှားစေသည်ဟု ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
Zoom ၏ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုဝန်ဆောင်မှုတွင် ကုမ္ပဏီမှယခင်က ကြေညာထားသည့် နေ့စဉ်အသုံးပြုသူ သန်း 300 မရှိပါ။Verge ပေါ်တယ်က ၎င်းဖြင့် တည်းဖြတ်ထားသည့် ယခင်ထုတ်ဝေခဲ့သော တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကို အာရုံစိုက်ပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက ဤအချက်ကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
Zoom ၏ မူရင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်... "နေ့စဉ်အသုံးပြုသူ သန်း 300 ကျော်ရှိသည်။"နှင့်."ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူသန်း 300 ကျော်သည် ဤခက်ခဲသောအချိန်တွင် Zoom ကိုအသုံးပြုသည်" ...တစ်ရက်အကြာတွင် မက်ဆေ့ချ်ကို တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ယခု ၎င်းသည်"300 Million Zoom Video Conferencing Members"ကိုဖတ်သည် ။
The Verge မှ ထောက်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ နေ့စဉ်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူနှင့် ဗီဒီယိုချတ်ပါဝင်သူ၏ သတ်မှတ်ချက်များတွင် ကြီးမားသောကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ဒုတိယအခြေအနေတွင်၊ တူညီသောလူကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ရေတွက်နိုင်သည်- သင်သည် တစ်နေ့တာအတွင်း ဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစက်ရှင်ငါးခုကို စီစဉ်ပြီးပါက၊ သင်သည် အသုံးပြုသူငါးဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။"Daily Active User" ကို တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရေတွက်ပါသည်။ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ လူကြိုက်များမှုကို အများအားဖြင့် တွက်ချက်ကြောင်း ဤညွှန်ကိန်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။မဟုတ်ပါက ပလပ်ဖောင်း၏ ပရိသတ်သည် အမှန်တကယ်ထက် များစွာကြီးမားနေမည်ဖြစ်သည်။
Zoom သည် ထုတ်ဝေပြီး တစ်ရက်အကြာတွင် အထင်မှားစေသော မက်ဆေ့ဂျ်ကို ဧပြီလ 24 ရက်နေ့တွင် တည်းဖြတ်ခဲ့ပြီး ယင်းသည် အွန်လိုင်း ထုတ်ဝေမှုများ၏ ခေါင်းစီးများအားလုံးကို ဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့သည်။The Verge သည် Zoom သို့ချဉ်းကပ်ပြီးနောက်၊ ကုမ္ပဏီသည် အမှားကို ချက်ချင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
"ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းနေ့စဉ်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတက်ရောက်သူသန်း 300 ကျော်ကိုကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ဧပြီလ 22 ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင် ပို့စ်တစ်ခုတွင် အဖွဲ့ဝင်များကို "အသုံးပြုသူများ" အဖြစ် အမှတ်မထင် ရည်ညွှန်းပါသည်။အမှားကို သိရှိပြီးနောက်၊ "အဖွဲ့ဝင်များ" သို့ မက်ဆေ့ချ်ကို တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ဒါက ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကို လေးနက်တဲ့ ကြီးကြပ်မှုတစ်ခုပါပဲ” လို့Zoom က The Verge ရဲ့ အယူခံကို တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီသည် နေ့စဥ်အသုံးပြုသူအရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို မဖော်ပြသေးသော်လည်း Zoom ၏ ပရိသတ်တိုးပွားမှုသည် အမှန်တကယ်ပင် အထင်ကြီးစရာကောင်းကြောင်း အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတွင် မှတ်သားထားသည်။ယမန်နှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်၍ နေ့စဉ် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်သို့ တက်ရောက်သူ အရေအတွက်သည် ယနေ့တွင် ၁၀ သန်းမှ သန်း ၃၀၀ အထိ တိုးလာခဲ့သည်။
Microsoft Teams နှင့် Google Meet တို့၏ အဓိကပြိုင်ဘက်များသည် နောက်ကျကျန်နေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုသူအရေအတွက်ကိုလည်း တိုးလာစေသည်။လအတွက် Microsoft video chats ၏နေ့စဉ်ပရိသတ်သည် လူ 70 မှ 75 သန်းအထိတိုးလာသည်။ယခုလတွင် ကုမ္ပဏီသည် တစ်ရက်လျှင် ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်တက်ရောက်သူ သန်း 200 ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
Google Meet ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင် ပါဝင်သူဦးရေသည် သန်း 100 သို့ရောက်ရှိရန် နေ့စဉ်3သန်းခန့် တိုးလာနေသည်။ Cisco ၏ Webex ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအက်ပ်ကို လူသန်း 300 အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည်။တစ်ရက်လျှင် စာရင်းသွင်းသူဦးရေ 240,000 အနီးသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ကုမ္ပဏီသည် နေ့စဉ်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများ၏ ညွှန်ကိန်းများနှင့် ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်သူအရေအတွက်ကို မဖော်ပြသေးပါ။
Google၊ Microsoft၊ Facebook တို့သည် အမီလိုက်နိုင်သော အခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အခမဲ့အခွင့်အရေးများဖြင့် သုံးစွဲသူအသစ်များကို ဆွဲဆောင်ရန် ကြိုးစားနေပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ Google သည် ၎င်း၏ Meet ဝန်ဆောင်မှုကို မကြာသေးမီက အခမဲ့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။